Sidekick: Browser-ka Shabakad ee Khibrad Shaqo oo Fiican | Laga soo bilaabo Linux
Sidaan horeyba sifiican ugu ognahay, dhamaanteen inta badan isticmaal kumbuyuutarka, Web browser si fudud ayaa loo tixgelin karaa codsiga ugu isticmaalka badan ku dhowaad mid kasta Nidaamka hawlgalka muhiim ah. Oo tan xigta hubaal, Qolalka Xafiiska, ka Faylasha daalacashada (faylasha) iyo Codsiyada Fariimaha Degdega ah.
Tan darteedna, waxaan si joogta ah u dhajinnaa wax ku saabsan bog-shabakadeed gaar ah, haddii ay cusub tahay ama ay ugu wacan tahay casriyeyn la sii daayay. Qoraalkan hadda la joogo, waa markiisa garab-istaag, web browser xiiso leh oo balan qaadaya jawi deg deg ah oo hufan a khibrad shaqo oo khadka tooska ah iyo iskaashi ah.
Kahor intaadan guda galin arinta, maskaxda ku hay taas ka sokoow tan cusub Sidekick web browser, waxaa jira isku dhufasho kale ama aan ahayn, taas oo loo noqon karo Desktops (GUI) ama Terminals (CLI), oo iyagu way kala duwan yihiin Faa'iido darrooyinka dhinacyo kala duwan oo waxtar u yeelan kara kala duwanaanta noocyada isticmaalayaasha / baahiyaha, sida:
Kuwani waa kuwa ugu caansan uguna muhiimsan, sidaa darteed hubaal waxaa jira kuwa badan oo cusub kuwa cusubna way sii wadi doonaan inay soo baxaan waqti ka dib. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato iyaga, waxaan hubaal ahaan doonaa a qoraal hore ku habboon dhowr ka mid ah oo aan kugu martiqaadeyno inaad raadiso oo aad aqriso, sida kuwa soo socda:
Waterfox: Waa biraawsar shabakadeed bilaash ah, furan oo madaxbannaan
1 Sidekick: Shabakad internet oo diiradda saareysa ka shaqeynta khadka tooska ah
1.1 Waa maxay Browser Sidekick?
1.2 Rakibaadda Sidekick iyo qaabeynta
Sidekick: Shabakad internet oo diiradda saareysa ka shaqeynta khadka tooska ah
Waa maxay Browser Sidekick?
"Sidekick waa nidaam kacsan oo cusub oo shaqeynaya kuna saleysan biraawsarka Chromium. Loogu talagalay in ay noqoto waayo-aragnimada ugu dambeysa ee shaqada ee khadka tooska ah, waxay u keentaa kooxdaada iyo aalad kasta oo websaydh ah oo aad u wada isticmaasho dhammaantood hal interface."
Taasna, ballanqaad yareeyo ama baabi'iyo isticmaalka xad-dhaafka ah ee tabs ama daaqadaha ama codsiyada desktop-ka, kuwaas oo inta badan aan u muuqan kuwo si fiican ula falgalaya inta ka hartay howlaha maalinlaha ah ee isticmaalaha caadiga ah, oo ka sarreeya dhammaan kuwa lagu dhex sameeyo barowsarka.
Sidoo kale, Sidekick wuxuu u taagan yahay muuqaalada awgeed soo socda:
Trackers Xayiraya: Sababtoo ah ma haystaan ​​qaab ganacsi oo xayeysiis ku saleysan, sidaas darteed waxay xayiraan xayeysiiska iyo kuwa wax raadraaca iyaga oo aan wax u dhimin.
Cayrinta ku-saleysan AI-ku-saleysan: Sababtoo ah waxay keydineysaa waxa lagama maarmaanka u ah xusuusta, si otomaatig ah u hakineysa tabka uusan isticmaaluhu u baahnayn mar uun.
Maareynta xasuusta ee tabta oo la hagaajiyay: Sababtoo ah waxay isticmaashaa xusuus aad u yar markay la shaqeyneyso tabs la mid ah.
Rakibaadda Sidekick iyo qaabeynta
Ka dib markii ay soo degsado, ka rasmiga ah download qaybtaiyo gudaha qaab ".deb", kiiskeyga gaarka ah, tan iyo markii, aan isticmaalo MX Linux 19, Waa inaan ku rakibaa galka "Download" adoo adeegsanaya amarka soo socda:
Ka dibna waad furi kartaa, taas oo muujinaysa waxyaabaha soo socda tallaabooyinka dejinta si loo sii wado dhameystirka dhammaan howlaha rakibida:
Isku soo wada duuboo, oo sida la arki karo, waa codsi aad u xiiso badan ku saleysan chrome, oo loo abuuray inay bixiso khibrad fiican oo dhakhso leh markaad ka shaqeyneyso a Web browser. Xaaladdayda gaarka ah, buuxi qaabeynta adoo adeegsanaya lambar lagu soo diray boostada halkii aad si toos ah ula soo gali lahayd. Waana ii muuqatay macquulka ah isticmaalkaaga xusuusta (2,9% ee RAM-kayga iyo 5.2% Firefox) iyo mid aad u fiican oo wax ku ool ah Webapps qaab-dhismeedka Opera ah, taasi waa, dhinaca bidix ee bidix.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan biraawsarka web loo yaqaan «Sidekick» taas oo ballanqaadaysa jawi deg deg ah oo hufan oo loogu talagalay khibrad shaqo oo khadka tooska ah iyo iskaashi leh; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sidekick: Shabakad internet si aad u hesho khibrad shaqo oo khadka tooska ah ka wanaagsan
Waxaan soo galay bogga SIdekick umana muuqato barnaamij bilaash ah, xitaa malaha il furan ...
Way fiicantahay inay tahay mashruuc ganacsi iyo in halkan looga hadlay, laakiin faahfaahintaas waa in lagu qeexaa maqaalka, maxaad u malayn?
Ku jawaab Bertie
Waad salaaman tihiin, Bertie. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Anigu meelna kamaan helin websaydhkaaga ereyada "Software Bilaash ah iyo Furan Furan", hase yeeshe, waxaan u qaatay in Sidekick gebi ahaanba ama qayb ahaan furan yahay, maaddaama ay ku saleysan tahay Chromium, oo ah nooca isha furan ee Google. Chrome.
Diego (kale) dijo
In la bilaabo isticmaalkeeda waxay u baahan tahay diiwaangelin ... waxaan ku bilownay bilow xun markii ay timaado asturnaanta. Haddii aan ku darno Blink "wicitaanka guriga" si aan ugu sheegno Google wixii aan qabannay intii aan fadhiga ku jirnay, iyada oo aan suurtagal ahayn in la xakameeyo ama ugu yaraan aysan fududeyn adeegsadaha, kuma qanacsani.
Oh, iyo hawsha soo degsashada RAM ee tabsyada aan la isticmaalin, waxaa lagu gaadhay ku-dar fudud oo loo yaqaan Auto Tab Discard:
Ujawaab Diego (kale)
Salaan, Diego. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo waxtarka aad u fiican ka heshay khibradaada shaqsiyeed. Shakhsiyan, wali waxaan adeegsadaa Firefox ka dib markii aan isku dayay daalacashada badan.
Mashiinka cusub ee RISC-V wuxuu sheeganayaa waxqabad rikoodh ah watt kasta